लोकसेवा Archives - सर्लाही टुडे
July 21, 2021 Karan SahLeaveaComment on लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
असल कर प्रणाली १. असल कर प्रणालीका गुण के–के हुन् ? लेख्नुहोस् । कर नीति, कर कानुन, करका दर, कर प्रशासन, कर असुली प्रक्रिया, करको उत्पादनमूलक उपयोगमार्फत कर प्राप्ति स्रोतको दिगोपनालगायतको समष्टिगत स्वरूप कर प्रणाली हो । कर प्रणाली सरल, पारदर्शी, करदातामैत्री एवम् आधुनिक प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ । यी असल कर प्रणालीका गुणहरू हुन् । अरू गुणलाई निम्नअनुसार उल्लेख […]
लोकसेवा तयारी विशेष (प्रश्नोतर)
July 14, 2021 Karan SahLeaveaComment on लोकसेवा तयारी विशेष (प्रश्नोतर)
वित्त र मौद्रिक नीति १. वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको फरकबारे चर्चा गर्दै नेपालको वित्त नीतिमा गर्नुपर्ने सुधार के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।  वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको फरकलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः वित्त नीति ः – कर, सरकारी खर्च तथा ऋणको माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अनुकूूल प्रभाव पार्ने नीति वित्त नीति हो । – […]
July 7, 2021 Karan SahLeaveaComment on लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
वित्तीय सङ्घीयता १. वित्तीय सङ्घीयता भनेको के हो ? नेपालमा यससम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ?चर्चा गर्नुहोस् ।  सङ्घीय प्रणालीका सरकारले आर्थिक अधिकारको स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थालाई वित्तीय सङ्घीयता भनिन्छ । यसमा सङ्घीय इकाइले वित्तीय अधिकारको प्रयोग गर्ने, जिम्मेवारी लिने, उत्तरदायित्व वहन गर्ने गर्छन् । यसले सबैभन्दा नजिकको सरकार सेवा प्रवाहमा बढी कार्यकुशल हुन्छ र यसलाई साधन […]